किन देखिन्छन् समाजमा यौन विकृति ? | eAdarsha.com
अहिले नेपाली समाजमा घटेका अनेक घटनाले सामाजिक सञ्जाल भरिएको पाइन्छ । त्यसको मात्रा हेर्ने हो भने धेरै यौनजन्य क्रियाकलामा जोडिएका छन् । कि त सामाजिक सञ्जाल राजनीतिका विषय तथा गाली र गलौजले भरिएका हुन्छन् कि त समाजमा भएका यौनिक क्रियाकलापका विषयले । किन यस्ता घटना समाजमा बढी देखिएका छन् ? त्यसको बारेमा फ्रायडको मनोविश्लेषणसँग जोडेर यो लेख तयार गरिएको छ ।
पेसाले चिकित्सक सिग्मन्ड फ्रायड सन् १८५६ मा अष्ट्रियामा जन्मेका हुन् । उनले जीवनभर न्युरोसर्जनका रुपमा काम गरे । यसरी काम गर्ने क्रममा उनले आफ्ना सेवाग्राहीको लामो अनुसन्धान गरेर मनोलैंगिक विकासका केही सिद्दान्तहरु प्रतिपादन गरेका छन् । ती सिद्दान्तले मानवजीवन र जगतका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । फ्रायडले गरेका अनुसन्धानमा हरेक कुरा लैंगिकता तथा यौनसँग जोडेर हेरेका हुनाले उनको धेरै आलोचना नभएको चाहिँ हैन तर पनि उनका अनुसन्धानहरुले विश्वमा धेरै नै चर्चा पाएका थिए ।
व्यक्तिको अन्तरमनमा यौन चाहनाको विकास भएर आउनु नै मनोलैंगिकता हो । अमेरिकन मनोवैज्ञानिक एलिजावेथ हर्लकले भनेकी छन्, ‘जब केटाकेटीहरु ११/१२ वर्षतिर लाग्दछन् तब उनीहरुमा यौन हर्मनहरुको उत्पादन हुन्छ र ती हर्मनहरुका कारण उनीहरुले विपरित लिंगी साथीहरुप्रति आँखा लगाउँछन् यो आफसेआफ चुम्बक फलामातिर तानिएजस्तो हुन्छ त्यो बाहिरबाट हेर्दा देखिँदैन ।’ सिग्मन्ड फ्रायड यो मान्यताभन्दा भिन्दै रहेका छन् उनका अनुसार ‘बालक जन्मँदै उसको यौनिक प्रतिविम्व देखिएको हुन्छ ।’ जब बालक १ वर्षको हुन्छ उसको चाहनाको परिपूर्तिको माध्यम चुस्नु हुन्छ त्यसैले यो उमेरका बालकलाई जे दिए पनि उसले मुखमा नै लान्छ । किनकि उसको त्यतिबेलाको लैंगिक वा यौन सन्तुष्टिको माध्यम मुख हुन्छ र उसले चुसेर नै सन्तुष्टि लिएको हुन्छ । जब बालबालिका १ देखि ३ वर्ष उमेरमा रहन्छन् त्यतिबेला उनीहरुको सन्तुष्टिको आधार गुदा हुन्छ । उनीहरुले मलमूत्र रोकेर वा परित्याग गरेर सन्तुष्टि लिएका हुन्छन् । लामो समयसम्म यो बानी रहेमा पछि ठूलो उमेरको भइसक्दा पनि ओछ्यानमा पिसाब फेर्ने बानी रहन सक्दछ । बालबालिकाको सबैभन्दा महत्वको उमेर ३ देखि ६ वर्षको हुन्छ । यो उमेरलाई यौनप्रधान उमेर भनिन्छ । फ्रायडका अनुसार यति बेला छोरा आमातिर र छोरी बाबुतिर आकषर््िात भएका हुन्छन् र छोराले बाउलाई र छोरीले आफ्नी आमालाई प्रधान शत्रुका रुपमा लिएका हुन्छन् । बा र आमाले गरेका रतिक्रियाको अनुभव गरेका हुन्छन् । किनकि धेरैजसो अभिभावकले बच्चा सानै भएको कारणले उनीहरुको ख्याल गरेका हुँदैनन् र तर केटाकेटीमा त्यसको नक्कलको बानी परेको हुन्छ र खेल्दा र अन्य कार्यमा आफ्ना समकक्षी सहपाठीसँग राति बाआमाले गरेका कार्यको अभिनय गरेका हुन्छन् ।
फ्रायडले उल्लेख गरेको युनानी पौराणिक कहानी ओडिपस कम्प्लेक्स पनि यही नै हो । उनका अनुसार ओडिपसले आफ्नो बा लुइसलाई मारेर आमा जेकास्टासँग विवाह गरेको थियो । तर पछि जब ओडिपसलाई यो वास्तविक घटनाको जानकारी भयो, पश्चातापले उसले आफ्नो आँखा आफैंले फोरेको थियो । केटाकेटीको ६ देखि ११ वर्षको उमेरलाई यौन अव्यक्तताको अवस्थाको रुपमा लिइएको पाइन्छ । यो उमेरमा केटाकेटीले यौनका कुरामा सुशुप्तता देखाउँछन् तर अत्यधिक मात्रामा बाआमाको नक्कल गर्दछन् । केटाले बाको हरेक कार्यको अभिनय गरेर देखाउँछ भने केटीले आमाको नक्कल गर्ने र आमाका कपडा लगाएर एउटा परिपक्व गृिहणी भएको वा आमाको पेसा व्यवसाय जे छ त्यसैको नक्कल गरेर बिताएका हुन्छन् । ११ वर्षपछि उनीहरुमा वास्तविक यौनका हर्मनहरु निसृत भएका हुन्छन् र विपरित लिंगी साथीहरुप्रति आकर्षित हुन्छन् ।
केटाकेटीको ६ देखि ११ वर्षको उमेरलाई यौन अव्यक्तताको अवस्थाको रुपमा लिइएको पाइन्छ
प्रायः बालकहरु सुखद सिद्धान्त (इड)को अवस्थामा रहन्छन् । उनीहरु १२/१३ वर्षतिर पुगेपछि विस्तारै इगोको प्रधानता देखिन्छ । इगोले केटाकेटीलाई सन्तुलनमा ल्याउने काम गर्दछ । तर कसैकसैको लैंगिकताको विकासमा केही विकृति देखापर्दछ, जुनकारणले पछिसम्म पनि यो सुखदको सिद्धान्त बाँकी नै रहेको हुन्छ । यस्ता मान्छेहरु कसरी हुन्छ तत्काल आनन्द लिन रुचाएका हुन्छन् उनीहरुलाई घरपरिवार इज्जत, बेइज्जत कुनै पनि कुराको मतलब हुँदैन । मानौं कुनै ५० वर्षको पुरुषले १६ वर्षको बालिकालाई बलात्कार गर्दछ तर उसलाई मैले गर्ने यो गलत काम हो भन्ने कुरा थाह छ यति हुँदाहुँदै पनि उसले त्यो काम गर्न पछि पर्दैन । केही व्यक्तिमा लैंगिक विकासमा विकृति देखा पर्दछ । उनीहरुमा परिपक्वको अवस्थामा पुगेको बेलामा पनि इडको प्रधानता बढी देखिएको हुन्छ र आजको मोज गर भोलि जेसुकै होस् भन्ने तर्फ लाग्दछन् । अत्यधिक लागुपदार्थ प्रयोग गर्ने, रक्सीले मातेर सडकमा कराउँदै हिँड्ने र कतिपय यौन विकृतिहरु जस्तै आफ्नो हाडनातामा करणी, बाबुबाट छोरीको बलत्कार यी यस्तै धेरै घटनाहरु जुन अहिले दैनिक जस्तो सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ यी लैंगिक विकृतिमा देखिएका सुखद सिद्धान्त(इड)को कारणले हो ।
सपना र मनोलैंगिकता
सपनाका बारेमा विद्वान्हरुको फरकफरक धारणा भएको पाइन्छ । कोहीले सपना दैनिक क्रियाकलापको मस्तिष्कमा परेको छाप हो जुन राति अर्धचेतनको अवस्थामा हाम्रो मस्तिष्कको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ । जसलाई चेतन अवस्थामा स्मरण गरेर व्यक्त गरिन्छ । कसैले यसलाई पेटको कारणका रुपमा लिएको पाइन्छ । हामीले खाएको खानाका कारणले पेटमा कब्जियत भएमा दिसा खाएको वा खेलाएको देख्नु, चिसो पदार्थ खाएको कारणले पेटमा तापको कमी भएमा सपनामा पौडेको वा पानी खेलाएको देखिनु, रुघाको संकेतका रुपमा माछा खाएको वा पानी खेलाएको देखिनु आदि स्वप्नाका कारणका रुपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । तर यसमा फ्रायडको मत फरक छ, उनी भन्छन् ‘अधिकांश सपना मुत्रासयमा पिसाब भरिएपछि र जनेन्द्रिय उत्तेजित भएपछि मात्र देखिन्छन् ।’ उनी अगाडि भन्दछन् ‘सपना पछिल्लो दिनको अनुभवमा निद्रा मनको प्रतिक्रिया हो र यो इच्छापूर्तिको प्रमुख आधार हो ।’ मानिसले वास्तविक जीवनमा पूरा गर्न नसकेका इच्छाको सपनाका माध्यमले पूरा गरेर सन्तुष्टि लिन्छ । सपना एउटा प्रतिरक्षाको मनोरचना पनि हो, यसले मानिसलाई विषादीमा जानबाट केही मात्रामा संरक्षण गरेको हुन्छ । सपना अभावको पूर्ति हो । उनी भन्दछन् ‘हामी जेजस्ता पापी सपना देख्दछौं, ती सबै जाग्रत मनुष्यद्वारा गरिने अपराध नै हुन् ।’ उनी अगाडि थप्छन् ‘सपनामा लौरो, गल, हतियार पुरुष जनेन्द्रियाका प्रतीक हुन् भने थाल, कसौडी, नाङ्लो, डालो देखिनु स्त्री जनेन्द्रियका प्रतीक हुन् ।’
माथि उल्लेख गरिएका फ्रायडको सपनाको विश्लेषणका आधारमा स्पष्ट हुन्छ कि सपनाको पनि यौन कृयाकलासँग अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ । मानिस वास्तविक जीवनमा समाजका नियम, कानुनलगायत अन्य विविध कारणले एउटा परहेजमा रहेको हुन्छ तर सपनामा रहन सक्दैन र नियन्त्रणको घेराबाहिर जान्छ, यस अवस्थामा ऊ त्यस्तो सपनामा घुमेको हुन्छ जुन उसले अभिव्यक्त गर्दा पनि लजाउनु पर्दछ । धेरै जसो सपना यौन गतिविधिसँग जोडिएका हुन्छन् । राम्रा मानिसहरु सपना देखेर सन्तुष्टि लिन्छन् भने खराब मानिसहरुले त्यस्ता काम गरेर देखाउँछन् ।
लैंगिकता जन्मिदादेखि नै विकास भएर जाने कुरा हो । पछि यसका कारणले ठूलो उमेरमा पनि कतिपय मानिसमा बाल्यकालको सुखद सिद्धान्त(इड)को अस्तित्व यथावत् रहन गएको अवस्थामा यौन विकृति देखा पर्दछन् । मुखले भन्न नसके पनि धेरैको ध्यान त्यस्ता क्रियाकलापतिर केन्द्रित भएको हुन्छ । धेरै नियन्त्रणमा रहेका हुन्छन् भने केहीले आफूमा रहेको इडको कारणले नियन्त्रण गुमाएका हुन्छन् । जसको कारण समाजमा अनेक प्रकारका विकृति र विसंगति फैलिएको हुन्छ । औंला चुस्ने बानी पछिसम्म रहेमा अभिभावकले ख्याल गरेर त्यसलाई हटाउने प्रयास गर्नुपर्दछ, अन्यथा नङ टोक्ने र पछि चुरोट गाँजा तान्ने, हात नधोइ खाना खाने र जति बेला पनि मुखमा हात लैजाने गर्न सक्दछन् । ३ देखि ६ वर्षको उमेरका केटाकेटीमा क्यास्ट्रेसन एन्जाइटी र पेनिस इन्भी देखिन सक्दछन् जसले गर्दा विशेषतः केटाले आफू केटी जस्तो बन्नका लागि लिंग खुर्कने वा काट्ने सम्भावना हुन्छ । जथाभावी यौन अंग प्रर्दशन गर्नबाट पनि नियन्त्रण गर्नुपर्दछ नत्र ठूलो उमेरमा पनि सजिलै यौन अंग प्रदर्शन गर्दछन् । केटाकेटीको अगाडि बोल्दा सकेसम्म सभ्य र शिष्ट शब्द प्रयोग गर्नुपर्दछ किनकि केटाकेटीलाई राम्रा भन्दा नराम्रा शब्दले चाँडो मस्तिष्कमा छाप पार्दछ । विशेषतः ६ वर्षको उमेरसम्म मनोलैंगिक विकासमा अभिभावकको ठूलो भूमिका हुन्छ ।
सिग्मन्ड फ्रायडले मनोलैंगिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए । उनले दिएको विचारप्रति तत्कालिन् जर्मन तानाशाह हिटलर नकारात्मक थिए । हिटलरले धेरै विचारकहरुको हत्या गरेका थिए त्यसैले फ्रायड पनि हिटलरको निसानामा थिए । उनकी छोरी अन्ना फ्रायडलाई सन् १९३४ मा गेस्टापो (हिटलरको नाजी सेना)ले गिरफ्तार गर्‍यो । उनले लिबिडोबाट हुने डेथड्राइभको विकासले फेरि विश्वयुद्द हुन्छ र धेरैको मृत्यु हुन्छ भनेका थिए । संयोग नै मान्नु पर्दछ कि सन् १९३९ मा फ्रायड अष्ट्रिया छोडेर लण्डन आएर बसेका थिए ठिक त्यति नै बेला हिटलरले अष्ट्रियामा आक्रमण गर्‍यो र फ्रायडको पनि सन् १९३९ मा नै क्यान्सरको कारणले देहान्त भयो ।
सुवेदी उपप्राध्यापक हुन् ।